Malunga nathi-uHiian Junbao Hydraulic Machchan Co, Ltd.
Wamkelekile kwi-Jiangsu Huaian Junbao Hydraulic Machchan Co, Ltd. Sakhethekile ekuveliseni i-valve yokulawula ukuhamba kokuhamba, i-valve yokulawula ukuhamba kwe-hydraulic, ivalve yokulawula i-spool emininzi, uxinzelelo oluphezulu lwevalve ye-port ezininzi kunye njl. Singabonelela nge-P40 Series, P80 Series, RD5200 Series, SD WAVOIL Series, DCV Series, ZD Series, CDB Series njalo njalo ukusuka kwi-30L / min ukuya kwi-400L / min, Uxinzelelo loxinzelelo ukusuka kwi-16Mpa ukuya kwi-50MPa kunye nolunye uxinzelelo olukhulu oluphezulu , iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwezolimo, kulwakhiwo, ipetroli, ekulobeni, kwimigodi nakwamanye amashishini.
Sikhokele kwinkqubela phambili kushishino. Kwaye sihlala sizinikezela kuyilo, uphando, ukuvelisa iimveliso ezintsha ngokwentengiso kunye nezicelo zabathengi bethu.Iimveliso zethu sele zithumele kumazwe asempuma mpuma eAsia, Australia, Middle East, Africa nase Latin America njalo njalo, nawo azuze igama elihle kule ndawo.
Siza kuqhubeka nokwandisa inkqubo yethu yolawulo lweshishini kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, ukuze sikwazi ukubonelela abathengi malunga nomsebenzi wonke ngeevolve ze-spool ezifanelekileyo kunye neempompo zegiya, ezixhaswa yinkonzo yethu egqwesileyo. Sisoloko sisenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zabathengi bethu.
Singumthombo wakho opheleleyo weemveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo ejolise kwizisombululo iiyure ezingama-24 ngosuku.